Iimfundiso zeBhayibhile Ngezobudlelwane
Ukutshata, Ubuhlobo, Umtshato, Imindeni kunye namanye amaKristu
Ubuhlobo bethu basemhlabeni bubalulekile eNkosini. UThixo uYise wamisela isiko somtshato kwaye senzelwe ukuba siphile kwiintsapho. Enoba sithetha ngabahlobo , ubudlelwane bokuthandana , imitshato, iintsapho, okanye intsebenziswano phakathi kwabazalwana noodadewabo kuKristu, iBhayibhile inokuthetha ngokuphathelele ubudlelwane bethu nabanye.
Qaphela intliziyo yakho ngaphezu kwayo yonke into, kuba ibeka ikhondo lobomi bakho.
Ingoma kaSolomon 4: 9
Uyithintele intliziyo yam, dadewethu, umtshakazi wam; Uyithintele intliziyo yam ngokubheka kwamehlo akho, ngesigxina esinye sekholeji yakho. (ESV)
KwabaseRoma 12: 1-2
Ngako oko, ndiyanincenga, bazalwana, ngeenceba zikaThixo, ukunikela imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilayo nongcwele, owamkelekileyo kuThixo, enkonzo yenu yokomoya yonqulo. Yaye ungahambisani neli hlabathi, kodwa uguqulwe ngokuvuselelwa kwengqondo yakho, ukuze uqinisekise ukuba kuyintoni na ukuthanda kukaThixo, okulungileyo kunye nokwamkelekileyo nokugqibeleleyo. (NASB)
1 kwabaseKorinte 6:18
Run from sin sex ! Akukho esinye isono esichaphazela ngokucacileyo umzimba njengoko lo. Ukuziphatha kakubi ngokwesini kuwona umzimba wakho. (NLT)
Musa ukukhohliswa: "Inkampani embi ibonakalisa ukuziphatha okuhle." (ESV)
2 kwabaseKorinte 6: 14-15
Musa ukuzibandakanya kunye nabangakholwayo. Ubulungisa bungabelana njani nobubi? Ukukhanya kungaphila nobumnyama?
Yintoni enokubakho phakathi kukaKristu nomtyholi? UmKristu unokuthandana njani nomntu ongakholwayo? (NLT)
1 Thimothewu 5: 1b-2
... Thetha kumadoda amancinci njengokuba uza kubazalwana bakho. Ukuphatha abafazi abadala njengokuba unyoko unyoko, kwaye uphathe amantombazana amancinci ngobungcwele bonke njengoko uodade bakho.
IGenesis 2: 18-25
Wathi ke uYehova uThixo, Akukuhle ukuba umntu abe yedwa, ndimenze umsizi. ... Ngoko uYehova uThixo wabangela ukuba ubuthongo obukhulu buwele phezu komntu, kwaye ebudeni belele, wathatha enye yezimbambo zakhe waza wavala indawo yayo enyameni. Umkhonto uYehova uThixo awuthabathele kumntu owawuwenza ngumfazi, wamzisa kumntu.
Yathi indoda leyo, Ekugqibeleni ithambo lam amathambo kunye nenyama yenyama yam, uya kuthiwa nguMfazi, ngokuba wathathwe kuMntu. Ngako oko indoda iya kumshiya uyise nonina, ibambelele kumfazi wayo, ibe yinyama. Yaye indoda nomfazi behamba behamba beze zeentloni. (ESV)
IMizekeliso 31: 10-11
Ngubani ongayifumana umfazi onobuchule kunye onamandla? Unqabileyo ngaphezu kweerbi. Umyeni wakhe unokumthemba, kwaye uya kucebisa kakhulu ubomi bakhe. (NLT)
Mateyu 19: 5
... kwaye wathi, 'Ngenxa yoko indoda iya kumshiya uyise nonina ize ihlangane nomfazi wayo, kwaye bobabini baya kuba yinyama' ... (NKJV)
1 kwabaseKorinte 7: 1-40
... Nangona kunjalo, ngenxa yobundlobongela, indoda nganye mayibe nomfazi wayo, kwaye ngamnye umfazi makabe nomyeni wakhe. Umyeni makanikele umfazi uthando olufanele kuye, ngokunjalo naye umfazi kumyeni wakhe.
Umfazi akanalo igunya phezu komzimba wakhe, kodwa umyeni wenza. Ngokufanayo nomyeni akanalo igunya phezu komzimba wakhe, kodwa umfazi wenza. Musa ukutshitshana ngaphandle kwemvume ngexesha, ukuze nizinikele ngokuzila ukudla nokuthandaza; uze uhlangane kwakhona ukuze uSathana angakuhendeli ngenxa yokungabi nokuzithiba kwakho ... Funda yonke itekisi. (NKJV)
Efese 5: 23-33
Kuba indoda yintloko yowesifazane njengokuba uKristu uyintloko yecawa , umzimba wakhe, kwaye yena ngokwakhe unguMsindisi wawo. Ngoku njengokuba ibandla lithobela uKristu, ngokunjalo nabafazi mabazithobele izinto zabo kubayeni babo. Madoda, bathande abafazi benu, njengoko uKristu walithanda ibandla kwaye wazidela ngenxa yakhe ... Ngendlela efanayo amadoda kufanele athande abafazi bawo njengemizimba yabo. Lowo uthanda umfazi uyazithanda yena ...
kwaye umvumele umfazi abone ukuba uyahlonipha umyeni wakhe. Funda umbhalo opheleleyo. (ESV)
1 Petros 3: 7
Ngendlela efanayo, nina madoda kufuneka nizukise abafazi benu. Phatha umfazi wakho ngokuqonda njengoko uhlala kunye. Unokuba buthathaka kunani, kodwa ungumlingani wakho olinganayo kwisipho sikaThixo sobomi obutsha. Mphathwe njengoko kufanelekile ngoko imithandazo yakho ayiyi kuphazamiseka. (NLT)
"Hlonipha uyihlo nonina, uze uhlale ubomi obude, obuzele ezweni uYehova uThixo wakho akunika lona." (NLT)
Levitikus 19: 3
"Yilowo nalowo makahlonele unina noyise, niyigcine iiSabatha zam; ndinguYehova uThixo wenu. (NIV)
"Hlonipha uyihlo nonyoko, njengoko uYehova uThixo wakho akuwisele umthetho ngako, ukuze uhlale ixesha elide, ukuba kuhambe kakuhle kuwe ezweni uYehova uThixo wakho akunika lona. (NIV)
INdumiso 127: 3
Abantwana sisipho esivela kuYehova; bayimvuzo evela kuye. (NLT)
IMizekeliso 31: 28-31
Abantwana bakhe bemi baze bambonge. Umyeni wakhe uyamdumisa: "Kukho abaninzi abanobuchule nabanamandla kwihlabathi, kodwa uyazigqitha zonke!" I-Charm ikhohlisa, kwaye ubuhle abuhlali; kodwa umfazi omesabayo uYehova uya kudunyiswa kakhulu. Mbuyisele kuye konke akwenzileyo. Vumela izenzo zakhe zimemezele esidlangalaleni indumiso yakhe. (NLT)
Yohane 19: 26-27
Wathi uYesu ebona unina ehleli khona ngasecaleni lomfundi amthandayo, wathi kuye, "Mfazi, nangu unyana wakho." Wathi kulo mfundi, "Nantsi unyoko." Ukususela ngoko, lo mfundi wamthabatha waya ekhaya.
Efese 6: 1-3
Bantwana, thobele abazali bakho eNkosini, kuba oku kulungile. "Hlonipha uyihlo nonina," ngumyalelo wokuqala onesithembiso: "ukuze kube kuhle kuwe kwaye uhlale ixesha elide emhlabeni." (NKJV)
Umhlobo uyakuthanda ngamaxesha onke, kwaye umzalwana uzalwa ngenxa yeengxaki. (NKJV)
Kukho "abahlobo" abonakalisa omnye komnye, kodwa umhlobo wangempela unamathela ngaphezu komzalwana. (NLT)
IMizekeliso 27: 6
Amanxeba avela kumhlobo onyanisekileyo ubhetele kunokubanga amaninzi kwiintshaba. (NLT)
IMizekeliso 27: 9-10
Isiluleko esisuka entliziyweni somhlobo sithandeka njengeqhumiso nesiqhumiso. Ungaze ulahle umhlobo-nokuba ngowakho okanye obawo. Xa inhlekelele ibetha, awuyi kucela umzalwana wakho ukuba ancede. Kungcono ukuya kummelwane kunomzalwana ohlala kude. (NLT)
Ubudlelwane obubanzi kunye nabazalwana kunye nodadewabo kuKristu
INtshumayeli 4: 9-12
Abantu ababini bangcono kunomnye, kuba banokunceda omnye nomnye aphumelele. Ukuba umntu omnye uyawa, omnye unokufikelela kwaye ancede. Kodwa umntu owela yedwa uyinkathazo yangempela. Ngokufanayo, abantu ababini balala kunye nabo banokufudumala. Kodwa umntu unokufudumala yedwa njani? Umntu omi yodwa unokuhlaselwa kwaye anqotshwe, kodwa ezimbini ziyakwazi ukuma emva kokubuya kwaye ziwine. Ezi zintathu zibhetele ngakumbi, ngokuba intambo emithathu eboshiweyo ayiphuli lula. (NLT)
Mateyu 5: 38-42
"Nivile ukuba kwathiwe, 'Iliso ngeliso kunye nezinyo ngezinyo.' Kodwa ndithi kuni, Musani ukumelana nomntu ongendawo. Kodwa xa umntu enokukubetha esiteni sokunene, jikela kuye enye.
Kwaye ukuba ubani unokukugweba kwaye uthathe ingubo yakho, makabe nesambatho sakho. Kwaye ukuba ubani unokunyanzela ukuba uhambe iikhilomitha enye, hamba naye amamayela amabini. Nika umntu ocela kuwe, kwaye ungamkeli lowo oya kukuboleka kuwe. "(ESV)
Mateyu 6: 14-15
Kuba xa uthethelela abanye iziphoso zabo, uYihlo wasezulwini uya kukuxolela, kodwa ukuba anixoleli abanye iziphoso zabo, noYihlo akayi kuxolela iziphoso zenu. (ESV)
Mateyu 18: 15-17
"Ukuba omnye umKristu ukona kuwe, hamba ngasese uze uchaze ityala." Ukuba omnye umntu uyayiphulaphula kwaye uyayivuma, uyiphumelele loo mntu. Kodwa ukuba awuphumelelanga, thabatha omnye okanye ababini kunye nawe uze ubuyele kwakhona, ukuze yonke into oyithethayo ingqiniswe ngamangqina amabini okanye amathathu.Ukuba umntu enqaba ukuphulaphula, thabatha ityala lakho kwibandla. Ngoko ke ukuba akayi kwamkela isigqibo secawa, khawuleza loo mntu ungumhedeni okanye umqokeleli werhafu okhohlakeleyo. " (NLT)
1 kwabaseKorinte 6: 1-7
Xa omnye wenu enengxabano kunye nomnye umKristu, unokwenza njani ukuba ufake ifowuni kwaye ubuze inkundla yelizwe ukuba yenze isigqibo kwimeko ngaphandle kokuyithatha kwamanye amakholwa! Awuqondi ukuba ngelinye ilanga thina amakholwa siya kugweba ihlabathi? Kwaye ekubeni uza kugweba ihlabathi, akunakunqumanisa na ezi zinto ezincinci phakathi kwenu? Awuqondi ukuba siya kugweba iingelosi? Ngoko ke kufuneka ufanele ukulungisa iingxabano eziqhelekileyo kulo mlo.
Ukuba unemibango yezomthetho malunga nemiba enjalo, kutheni ungena ngaphandle kweejaji ezingahlonishwa ngecawa? Ndiyathetha oku kukuhlazisa. Ngaba akukho nawaphi na kwicawa ngubani ozilumkileyo ngokwaneleyo ukugqiba le micimbi? Kodwa kunoko, omnye umakholwa uyamkela omnye - ngokufanelekileyo phambi kwabangakholwayo! Kuze kubekho ukutshutshiswa komnye nomnye kukutshatyalaliswa kwakho. Kutheni ungamkeli nje ukungabi nabulungisa kwaye ushiye kuloo nto? Kutheni ungavumeli ukuba ninyengwe? (NLT)
Kuba wabizelwa kwinkululeko, bazalwana. Kuphela musa ukusebenzisa inkululeko yakho njengethuba lenyama, kodwa ngothando nisondelane. (ESV)
1 Timoti 5: 1-3
Ungalokothi ukhulume kakubi kumntu osekhulile, kodwa unxuse kuye ngokuhlonipha njengoko uthanda uyihlo. Thetha namadoda amancinci njengokuba uza kubazalwana bakho. Ukuphatha abafazi abadala njengokuba unyoko unyoko, kwaye uphathe amantombazana amancinci ngobungcwele bonke njengoko uodade bakho. Yinyamekele nayiphi na umhlolokazi ongenamnye onokumnakekela. (NLT)
Kwaye masicabangelane ukuze sivuselele uthando nemisebenzi emihle ... (NKJV)
1 Yohane 3: 1
Jonga ukuba uBawo uyasithanda kangakanani, ngokuba usibiza ngokuba ngabantwana bakhe, kwaye yile nto esiyiyo! Kodwa abantu abakuleli hlabathi abaqapheli ukuba singabantwana bakaThixo kuba abayizi. (NLT)
Okungakumbi NgeBhayibhile, Uthando, Nobuhlobo
Iintlobo Zothando eBhayibhileni
Iiminyaniso zeBhayibhile Ngothando nobudlelwane
Iimfundiso zeBhayibhile malunga noMtshato Ubuhlobo
Iimfundiso zeBhayibhile malunga nobudlelwane beentsapho
Iiminyaniso zeBhayibhile malunga nobuhlobo
AbaCamngceli beZiqhamo kwi-Intanethi
Izibalo ezivela kwiMfazwe kwiDrugs Xela ibali
Indlela yokwenza iBlue Bottle Chemistry Ukubonisa
I-Wagner College Admissions
Umrhumo oqhelekileyo weNgxaki
Ziziphi iimpembelelo zeNdalo zeTyhuna?
Indlela yokuphumeza i-Volleyball Set
11 Iingqungquthela Wonke umntu kufuneka azi
Iintlobo ze-Lipids kunye nalapho zifumaneka khona